“Lalao iray izay tiako indrindra…” : raikitra ilay seho goavana hataon’i Lalatiana | NewsMada
“Lalao iray izay tiako indrindra…” : raikitra ilay seho goavana hataon’i Lalatiana
Tsy nofoanana fa hahemotra. Nitana ny teniny i Lalatiana sy ny mpikarakara, satria hatao ny 15 jolay izao ilay “Lalao iray izay tiako indrindra…”
Ela ny niandrasan’ny mpankafy azy… Efa tonga teto ary efa vonona niatrika ny seho goavana no tratran’ny tsy nampoizina i Lalatiana sy ny ekipany, ny volana oktobra 2017. Nanimba zavatra maro ny pesta ka voatery nofoanana ny fampisehoana tokony ho natao ny 8 oktobra, tao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina.
Fantatra kosa anefa, araka ny vaovao avy amin’ny mi’Ritsoka Production, fa raikitra ary hotontosaina ny alahady 15 jolay ho avy izao ilay fampisehoana ao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. “Efa nampanantenainay io fa tsy maintsy hotontosaina, saingy voatery nahemotra lavitra satria izay indray vao nahita daty niraisana ny mpanakanto sy izahay mpikarakara. Tsy misy miova izay nomanina, ary hihatsara kokoa aza ny tolotra”, hoy ny nambaran-dRandriamampianina Hery, tale jeneralin’ny mi’Ritsoka Production.
“Lalao iray izay tiako indrindra…” ny lohatenin’ny fampisehoana, notsongaina tao anatin’ilay hira “Misy antony”.
Hiatrika ny famerenana
Araka ny fanazavana hatrany, hiatrika ny famerenana, manomboka anio, ireo mpitendry hanaraka an’i Lalatiana, eto an-toerana. Mpanakanto tanora manan-talenta, ahitana ireo mpiangaly ny zavamaneno tsofina toa an-dry Tsanta, Andriniony, Andry Mika. Eo koa ry Solofo Bota sy Njaka eo amin’ny vata maroafitsoka, Nini eo amin’ny amponga maroanaka, Henintsoa eo amin’ny gitara beso, ny Anaa Quator eo amin’ny feo lafika ary ireo mpitendry zavamaneno misy tadiny. Ho avy hiaraka amin’i Lalatiana i Rija Randrianavonisoa, mpitendry gitara mpanaraka azy any ivelany any. Maromaro rahateo ny ketrika niarahan’izy ireo ka fotoana hanomezana fofompofony amin’izany io seho io. Santionany amin’izany ireo hira tranainy teto afovoan-tany, naverin’izy mianadahy.
Na izany aza, tsy hadinoina hatrany ireo hira nanamarika vanim-potoana, nankafizan’ny maro an’i Lalatiana. Misy amin’ireny ny voarakitra ao anatin’ny rakikira “Ianao no namako” sy “i-Malala”, ankoatra ireo hiran’i Albert Rajaofara, rain’i Lalatiana, hanomanany rakikira manokana ihany koa.